Ụbọchị My Pet » 12 Smart-akpali n'ihi na Online dịwara
site Steve Nakamoto
12 Smart-akpali n'ihi na Online dịwara
emelitere ikpeazụ: Oct. 24 2020 | 5 min agụ
The mgbawa uto nke brọdband Internet na-eme ka o doo anya na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ ebe a na-anọ. Na taa arụsi ọrụ lifestyles, ọtụtụ kpọrọ na-achọta na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ ma mfe, dị ọnụ ala karịa, ma na-erughị na-ewe oge ka omenala mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụzọ.
Dị ka ihe iwebata ka ụzọ ọhụrụ a nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ebe a bụ ụfọdụ smart Nkea ka ime iji na-eme ka gị na ahụmahụ ndị ọzọ na-akwụghachi ụgwọ ma na-erughị na-egbu mgbu:
1. ỊNARA onye mmụta obibia: Ghọta na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ ihe ọ bụla karịrị a dị iche iche ụdị iwebata. Nye ya a na-agbalị ka a obere oge ma mee ka ọ ịgbakwunye gị bịa na-elekọta mmadụ atụmatụ. Emela online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị gị nanị njikọ ahụ na-abụghị nwoke ibe, ma ị ga-abịa gafee dị ka ndị owu na-ama ma ọ bụ olileanya. Ezie nzute oruru ịhụnanya aga ime bụ n'ụzọ dị ukwuu a nọmba egwuregwu (Iwu averages), na-aghọta na ọ bụghị otú ọtụtụ ndị anaghị arụ ọrụ na ihe. Gịnị ka okwu bụ ma e nwere otu onye na-eme.
2. Ị gaghị eme ya naanị: Mee nke a a ọzọ fun na-akpali ọrụ site metụtara enyi ma na-eme nke a online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị njem ọnụ. Ị nwere ike ịmụta ngwa ngwa site n'iji ndetu na-aga site usoro ọnụ n'otu oge. Nke a ga-na-mgbali anya nke ị, eme ka ị na-egosi na-erughị achọsi ike ndị ikom, na-eje ozi dị ka nchebe megide weirdo onye nwere ike ezobe si n'ebe achọ ibe loners.
3. Amalite ọhụrụ na ISO ọhụrụ: Unu na-ebu mmetụta uche ọ bụla akpa n'ime ọhụrụ a njem. Nke ahụ pụtara na ị kwesịrị ị na-ewepụ ọchịchọ ọ bụla mkpesa, ikpe, akatọ, ma ọ bụ na-adịghị mma banyere mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, romance, n'anya, ma ọ bụ ndị na-abụghị mmekọahụ. Gị àgwà na-adịghị ahụ anya n'ụzọ ime ka a dị ukwuu mbụ echiche na a ọhụrụ ịhụnanya atụmanya. Na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, na i nwere ohere pụrụ iche nke ga-esi mara onye nke ọzọ na-enweghị n'ezie ịhụ ma ọ bụ nzukọ ha mbụ. Mee ka gị na àgwà sparkle dị nnọọ ka ị ga-amasị gị mma ọnụ ọchị na-eme a ihu na ihu nzukọ.
4. Họrọ ezi Ịṅa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị: Jiri ihe ịga nke ọma na-akwụ na saịtị. Zere free onye mgbasa ozi nke na-gara afọ iri na ụma, ndị di na nwunye, na stalkers. Ndị na-eri nke usoro ihe omume bụ uru ya maka echetakwa si freeloaders. Ị nwere ike ịgbakwunye mgbalị gị site na-achọta a niche ahịa dabeere na a akpan akpan mmasị i nwere (DateMyPet.com n'ihi na anu ulo) ma ọ bụ a pụrụ iche àgwà na i nwere (agbụrụ, nnukwu-size).
5. Ide nwu irè AD Detuo oké FOTO: Nwere a nkà enyi dee a ọma nkọwa nke gị na dị mkpụmkpụ, ụtọ, na catchy. Enyela si ọtụtụ nkọwa ma ọ bụ ozi nkeonwe. Idowe ihe mmewere nke omimi, kwa. Jide n'aka na i nwere a ire ụtọ foto, nke ahụ bụ na-adịbeghị anya, nke naanị gị, na a spirited ọnụ ọchị na ihu gị. Were ọtụtụ sample foto na họrọ otu nke kasị mma. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-agụnye ọtụtụ foto ma ọ bụ ịgbanwe ha oge. Elelịla ike nke a na foto. Cheta Chinese ilu nke na-agụ: A foto bụ uru a puku kwuru.
6. Soro A Nchekwa internet mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụkpụrụ: Ịgba onwe gị 3 correspondences kwa onye. Imeri n'ebe ọha n'ihi na kọfị na n'etiti ehihie dị ka otu awa. Nwere ihe ndokwa e mesịa (izute a enyi) nke mere na ị na-apụghị ekwu n'ime anọ gburugburu kwa ogologo. Ọ bụrụ na ị na-eche iru ala, -tinyere a enyi ma na-agwa onye ị na-aga na izute na ha nwere a ego ohere izute mmadụ abụọ kama otu. Ọ bụrụ na ị ga-esi site na nke a iwebata, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike n'ihu na a nkịtị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụkpụrụ, na-ahapụ Internet akụkụ n'azụ, na-echefu.
7. Get doro anya na ihe ị na-achọghị: Igbo si na losers ma ọ bụ nwere ize ndụ ndị mmadụ. Atụkwasị obi gị nsinammuo na downside na ọgụgụ isi gị na isi. Ọ bụrụ na onye na-egosi iju n'ụzọ ọ bụla, ijide n'aka na-agafe na na ohere. Ị nwere ike na-ezighị ezi na nke a karịsịa onye, ma ị ga-nchebe na n'ikpeazụ. Ụfọdụ clues iju omume na-agụnye: ọtụtụ ozi ịntanetị kwa mgbe, mmekọahụ n'ezoghị asụsụ, Ịchịkwa kwuru, oké iwe, mpunari si eme, na ọtụtụ zoro nzuzo ma ọ bụ ihe ndị na-hà na-emegide.
8. Mara ihe ị na-achọ: Nwere a doro anya echiche nke ihe na-amasị gị na a ogologo oge ịhụnanya onye na okwu nke obi, agwa, àgwà, na ndakọrịta. Lee onye na-abịa mmekọrịta mgbaru ọsọ, adabako àgwà, yiri isi ụkpụrụ, na a ndụ kwesịrị ekwesị. Kpachara anya na mbụ iji ewepụkwa ihe ndị ọjọọ, ma-adị ngwa anya maka ihe ọma na ị na-achọ na a ịhụnanya mmekọrịta. Nke ahụ ga-eburu gị mma na-eme ka ị mara mma ka ndị ọzọ.
9. ADỊGHỊ SPOOK ha MMALITE: Ọ bụrụ na ị na-ahụ onye na-magburu onwe nwere dị ka a ịhụnanya onye ẹfep scaring ha site na-arịọ ọtụtụ ajụjụ, na-arịọ na-ezighị ezi ụdị ajụjụ, misrepresenting àgwà, pụtara kwa nọ ná mkpa na, ndị na-enweghị ndị ọzọ na-elekọta mmadụ outlets, enyi, ma ọ bụ nwere ịchọ ịlụ gị ịbịa. Kọọrọ kpam kpam banyere gị na-eme, ma na ọ dịghị mkpa ka ha biri ma ọ bụ na-eche na adịghị ike gị. Ka ọmụma eruba na a nkịtị ijeụkwụ dị ka ọ na-adịkarị kpughere site na mmekọrịta. Unu n'ọnyà nke na-arịọ ma ọ bụ na-ekpughe ihe ọmụma dị ukwuu kwa anya.
10. Ọ ịgha ụgha banyere ngwá, BỤRỤ ONWE GỊ: Behind a na kọmputa ọnụ a na mmadụ nwere ike ebube, abụghị di na nwunye, ịga nke ọma, ọgaranya, na ihe niile ọnụ ebube, ma ha eziokwu nwere ike ịbụ a otutu dị iche iche. Atụla dị ka ndị ọzọ na-eji ochie foto nke onwe ha ma na-ede ikwubiga okwu ókè profaịlụ banyere onwe ha. -Eme ihe n'eziokwu onwe gị na mgbe ahụ ịjụ gị atụmanya a akọ na-eme ihe n'eziokwu kwa. Ọ bụrụ na e ọ bụghị n'eziokwu, e nwere ike ịbụ ihe ọ bụla obi ma. Nke ahụ bụ dịghị ụzọ na-amalite ụdị ọ bụla nke ogologo oge ịhụnanya mmekọrịta.
11. ỊNARA A ezumike fanye NA ịtụleghachi: Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nwere ike iyi gị ala ma ọ bụrụ na ị bụghị anya. Ọ nwekwara ike ime ka ị na-erughị mmadụ na ndị ọzọ ikwu okwu ọjọọ banyere mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-abụghị nwoke ibe. Ọ bụ ya mere m na-egosi na ị na-edebanye aha maka a 3 ọnwa na ndenye aha na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ ibido. Mgbe 3 ọnwa dị n'elu, na-a ezumike na ịtụleghachi gị ịga nke ọma na ọdịda. Ma eleghị anya, ị chọrọ ịgbanwe gị ad Detuo ma ọ bụ foto gị. Dị ka a maara ihe na-akụ azụ, ma eleghị anya ị chọrọ ịgbanwe gị sịga n'ihi ihe ụdị e kere eke o yiri ka unu na-adọta. Ma eleghị anya, ọ bụ oge na-agbalị saịtị ọzọ iji hụ ma ọ bụrụ na ị na-adọta a dị iche iche ụdị onye. Ma, ọtụtụ ndị niile, ezumike ga-enyere gị enwetaghachi gị anya nke mere na gị ọzọ banye online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ga-enwe nchekwube ma na-enwe.
12. Gaa Kporie ma ọ bụ adịghị MEE YA AT nile: Mee ọrụ a fun ma ọ bụ adịghị ekere òkè mgbe nile. Ozugbo ọ na-aghọ a hassle, emebi gị ùgwù onwe onye, ma ọ bụ na-ele ka ọ na-obi nkoropụ, kwụsị ime ya na-elekwasị anya na ihe ọzọ ná ndụ gị. Internet mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nwere ike ịbụ ihe ịga nke ọma n'ihi na ọtụtụ ndị ma, ọ na-adabere na-eme smart Nkea, ịnọgide na-enwe oké àgwà, nwere adịghị agbanwe agbanwe ndidi, na ịbụ n'ụzọ mmetụta uche njikere mgbe chi-emesị ụzọ gị.
NKE BỤ EZIOKWU
Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ ihe ọ bụla karịrị a ụzọ ọhụrụ na-eme ka okwu mmeghe. Mee nanị smart Nkea na izere ogbi ndị iji onwe gị na ụzọ n'anya. I maghi ma ọ bụrụ na-esote onye na bụ otu maka gị. Ndien ke egwuregwu nke ịhụnanya, nanị ihe ọ na-ewe onye na-aghọ a-eto eto maka ndụ. Jisie na-enweta gị njem!
Ihe na-eme na mbụ Ụbọchị Site Zodiac Ama
3 Atụmatụ na iji Mee Ka Ị Zuru Okè chick Igwe Ọdụdọ!
3 Atụmatụ Iji dịwara N'oge udomo oro Oge
5 Pụrụ Iche Noua Ụbọchị echiche